Fandraharahana : birao tokana ho an’ny fanondranana entana | NewsMada
Fandraharahana : birao tokana ho an’ny fanondranana entana
Hisokatra amin’ny fomba ofisialy anio, etsy amin’ny Conquête Antanimena, ny Birao tokana ho an’ny fanondranana entana any ivelany (GUE). Tanteraka izany vokatry ny fiaraha-miasan’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana, sy ny International trade board of Madagascar (ITBM). Tanjona ny hanamaivanana ny sakana sy ny olana amin’ny fanondranana entana mankany ivelany.
Nanohana ny famolavolana azy ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana ho an’ny fampandrosoana (Pnud), ny taona 2014, niara-niombon’antoka tamin’ny Foibe iraisam-pirenena misahana ny varotra (ITC). Tao anatin’izany ny fanofanana ireo mpiasa hiandraikitra azy sy ny fampitaovana.
Anisan’ny tombontsoa azon’ny mpandraharaha amin’ny GUE, ny fahamoran’ny fikarakarana ny antontan-taratasy, efa tafiditra ao anatin’ny Politikan’ny varotra iraisam-pirenena, nampahafantarina tany Genève ny jolay 2015 teo anivon’ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana n y varotra (OMC).